"Kuyalnik" (स्पा, ओडेसा): वर्णन, treÃ
अचम्मको Kuyalnik मुहाना, काला सागर को उत्तर पश्चिमी तट मा स्थित, शाब्दिक ओडेसा को लाइन रिसोर्ट मा धक्का। यो प्राकृतिक जलाशय को लम्बाइ बीस-आठ किलोमिटर छ।
यस रिसोर्टमा को घटना को इतिहास
समुद्र देखि Kuyalnik मुहाना को चौधौँ शताब्दीमा लगभग अलग। केही समय पछि, त्यो युक्रेनमा सबैभन्दा नुनखरा एक भएको छ। टर्की शब्द बाट अनुवादित "Kuyalnik" अर्थ "बाक्लो"। यो अचम्मको छैन: आज, प्रति लीटर दुई सय ग्राम को मुहाना को नुनीन मा नुन एकाग्रता। फ्रान्सेली इन्जिनियर र यात्री, Giyom डी Boplan खोजकर्ता मा, सत्रौँ शताब्दीमा मा, युक्रेन वर्णन लगे, Kuyalnik, कि उल्लेख "समुद्र नजिकै, शाब्दिक माछा संग teeming स्थित।" आज, तथापि, यो पनि छैन मुहाना शंख र केकडे छ।
सम्म 1931, त्यहाँ नुन माछा गरियो। Kuyalnik मार्फत प्रसिद्ध आकाशगङ्गा बित्यो। आज यो सिर्फ एक पटक तल मा गोल गरेका थिए ओक बवासीर, सम्झना दिलाउँछ। को मुहाना को नुन गुणस्तर धेरै उच्च मानिन्छ। जाहिर छ, यो किन यति युरोप मा सराहना गरिएको छ। समय साँच्चै अमूल्य सम्पत्ति हो भन्ने जटिल जैविक र रासायनिक प्रक्रिया प्रभावित थिए जो मुहाना, को sediments।
1834 यो अचम्मको प्राकृतिक जलाशय रिसोर्टमा तल्लो पुग्छ मा किनकी यो पहिलो संगठित भएको थियो। त्यसपछि भएकोले मुहाना को उपचारात्मक माटोको एकदम लोकप्रिय बनेका छन्। , को sediments मा डुबुल्की मार्न आफ्नो शक्तिशाली गन्ध सास लिनु, आवेदन र यति मा। ई राख्नु क्रममा, यहाँ rheumatism, बाँझोपन, र psoriasis भोगे गर्नेहरूलाई आउनुहोस्। यसलाई त्यहाँ उपचारात्मक माटोको र नुन नुनीन मात्र होइन मदत, तर खनिज पानी "Kuyalnik" को नब्बे मिटर को गहिराई बाट बाहिर निकाल्न छ कि साबित भएको छ।
सोभियत पटक मा, मुहाना नजिकै मुहाना रूपमा साथै नाम थियो जो एक ठूलो स्वास्थ्य रिसोर्ट, बनाइएको थियो। उहाँले Kuyalnik आराम र उपचार गर्न छनौट गर्ने लिनेहरू, आज काम गर्दछ।
आज ओडेसा पर्यटक एक विशाल सेना लाग्छ। तिनीहरूलाई धेरै आराम गर्न छनौट र उपचार स्वास्थ्य रिसोर्ट छ। यहाँ सान्दर्भिक चिकित्सा रेकर्ड भएका ती आउँछन्। उपचार बारे र यो स्वास्थ्य रिसोर्ट द्वारा प्रस्तावित बाँकी बारेमा समीक्षा, त्यसैले धेरै कोठा, पूर्वाधार र सेवा स्तर मनपराएका सुझाव। Kuyalnik रिसोर्टमा लामो रूस बीच लोकप्रिय भएको छ। र यो अद्भुत मुहाना, विरामीहरु छ शाब्दिक "पुल" केही रोग भने जो धन्यवाद छ।
"Kuyalnik" मा (स्पा, ओडेसा) विरामीहरु स्नायविक विकारहरु, यौन क्षेत्र, को musculoskeletal सिस्टम को समस्या संग सम्बन्धित pathologies को एक विशाल संख्या ठीक गर्न आएको, र यति मा। डी विरामीहरु उमेर फरक छैन। त्यहाँ त बच्चाहरु वा वयस्क लागि कुनै प्रतिबंध हो। समीक्षा द्वारा न्याय, "Kuyalnik" - अस्पताल। Pirogov - मात्र अवकाश स्वास्थ्य पुनर्स्थापना रूपमा धेरै लागि उपयुक्त छ। जहाँ यसलाई स्थित छ एक क्षेत्र मा निर्मित रेस्टुरेन्ट, क्याफे र बारहरू, अवकाश केन्द्र संचालित। ताजा फल खान, एक सानो बजार, स्वास्थ्य रिसोर्ट "Kuyalnik" नजिकै स्थित जानुहोस्। अस्पताल (ओडेसा) Pirogov पछि नाम सबै वर्ष दौर संचालित। यो उद्देश्य लागि सबै अवस्था प्रदान गरिन्छ।
भर्ना को लागि आवश्यक कागजातहरू
स्वास्थ्य केन्द्रमा केही चिकित्सा अवस्था को उपस्थिति मा एक दिशा मा पुग्न सकिन्छ। तिनीहरू सेवा गर्न सक्षम छन् भनेर भर्ना लागि मात्र आवश्यकता, शारीरिक गतिविधि एक निश्चित स्तर संग विरामीहरु छ छ।
पर्यटकहरू "Kuyalnik" (स्पा, ओडेसा) केही कागजातहरू को दर्ता लागि प्रदान गर्न आवश्यक छ गर्न। वयस्कहरूको लागि र छोराछोरीको लागि पहिचान कागजात, खोप प्रमाण र संक्रामक वातावरण संग सम्पर्क को कमी certifying सुरक्षा बाहेक - यो एक निर्धारण भएको छैन थप दुई भन्दा महिना छ, एउटा पासपोर्ट, एक अस्पताल कार्ड (फारम 072 / एक) हुनुपर्छ ।
अस्पताल। Pirogov सीधा मुहाना को बैंकहरू मा, शहर को केन्द्र देखि तेह्र किलोमिटर, ओडेसा मा स्थित छ। आफ्नो विशेषताहरु मा Kuyal'nitskogo चिकित्सकीय माटोको मानक बुझे। तिनीहरूले सक्रिय सामाग्री, micro- र ठूलो परिपक्वता भडकाऊ foci योगदान कि macroelements समावेश गर्दछ। तिनीहरूले क्षतिग्रस्त अंगहरु र प्रणाली को समारोह बहाल, मानव शरीर थुप्रै रक्षात्मक प्रतिक्रिया उत्तेजित। अस्पताल "Kuyalnik" उपचार मुहाना देखि चमत्कारी नुनीन प्रयोग भर्खरै जीर्णोद्धार माटोको स्नान मा आयोजित छ जसमा, सालाना धेरै हजार विरामीहरु प्राप्त गर्दछ। त्यहाँ स्वास्थ्य पूर्ण रिकभरी लागि सबै अवस्था हो। अस्पताल। Pirogov धेरै खाना वस्तुहरू र मनोरञ्जन पूर्वाधार नजिकै पार्क क्षेत्रमा अवस्थित छ।
Vacationers जो सबै सुविधाहरु छ, two- वा एकल कोठा मा अवस्थित छ। आवासीय नर्सिङ होम कोष दुई पन्ध्र-housings संग सुसज्जित छ। आवास को लागि अपार्टमेन्ट सुइट्स र जुनियर सुइट्स र स्तर प्रदान गर्दछ। मूल्य समावेश: सबै भोजन, विरामीहरु को चिकित्सा संकेतक अनुसार, "बुफे", साथै वायरलेस इन्टरनेट र चिकित्सकीय र निदान प्रक्रियाहरु को दायरामा सेवा छ।
सबै कोठा, वर्ग बिना नयाँ आरामदायी फर्नीचर, एक फ्रिज र एक टिभि बाहेक। यो वायरलेस इन्टरनेट जडान गर्न सम्भव छ। बेड, टेबल, डेस्क, कुर्सियों, अलमारियाँ - सम्पूर्ण स्थिति ओवरहाल पछि अद्यावधिक गरिएको छ। को छत फर्श - कोठा मा भुइँमा। पर्खालहरु र bedspreads र पर्दे को डिजाइन रंग योजना को नै शैली बनेको छन्।
दुई-बेडरूम सूट, फर्निचरहरू सेट, सेट र एक सोफा बेड सबै कोठा लागि मानक बाहेक। अतिथि क्षेत्र पनि एक हो कफी टेबल। सबै कोठा एक बालकनी छ अघि, जहाँ त्यहाँ प्लास्टिक कुर्सियों छन्।
जीवित लागत अपार्टमेन्ट को श्रेणी, साथै मौसम मा निर्भर गर्दछ। बारेमा सत्र डलर - एक व्यक्ति लागि रिसोर्ट मा 30 सेप्टेम्बर जुन को पहिलो मानक कोठा चार सय रिव्निया खर्च हुनेछ। मूल्य रोग निदान अनुसार, आवास, सबै भोजन र व्यापक उपचार समावेश छ। अस्पताल "Kuyalnik" (ओडेसा), मूल्यहरू जसमा धेरै एकदम लोकतान्त्रिक छन्, र निम्न अवधारणा प्रदान गर्दछ: तपाईँले आवास बिना प्रक्रियाहरु लाग्न सक्छ। एक डिलक्स कोठा श्रेणी मा एकल आवास को मामला मा तीन हजार भुक्तानी गर्न हुनेछ। एक डबल जूनियर सुइट एक ओछ्यानमा एक दिन बारेमा तीस डलर लागत।
यो अस्पताल तिनीहरूलाई। Pirogov ती विरामीहरु जस्तै स्नायविक syndromes रूपमा स्नायु प्रणाली रोगहरु, ग्रस्त गर्ने को लागि सिद्ध छ। यहाँ osteochondrosis संग निदान भएका मान्छे, भोगे आघात र arachnoiditis र neuritis को प्रभाव, र यति मा मदत गर्न। डी भएको रिसोर्ट यस्तो arthrosis, rheumatoid गठिया र अरूलाई रूप मा, लोकोमोटर सिस्टम उपकरण मा विकलांग वयस्क र बच्चाहरु पूरा गर्न सक्छन्।
अस्पताल र स्वास्थ्य पुनर्स्थापना, यस्तो thrombophlebitis रूपमा भास्कुलर pathologies, संग विरामीहरु धमनी occlusive रोग। उपचार संयोजन मा जटिल यस्तो psoriasis वा neurodermitis जस्ता छाला रोग को उन्मूलन मा सकारात्मक परिणाम दिने, एक अद्वितीय ग्याँस माटोको स्नान छ।
विद्यमान व्यक्तिहरूलाई साथै, रिसोर्ट मा निरन्तर निको पार्ने नयाँ तरिका शुरू गरिएको छ। हालसालै, "Kuyalnik" अनुभवी विज्ञहरू आयोजित गरिएको छ र presso- र जो स्थानीय मुहाना देखि आवेदन नुनीन संग संयोजन skenarterapiya। समीक्षा द्वारा न्याय धेरै मान्छे, यो प्रविधी पहिले नै जोडों र मेरुदण्ड को दुखाइ भूल मदत गरेको छ।
को अस्पताल इलाका प्रबन्ध छ मा नुन मेरो, श्वसन अङ्गहरूको विकृति निदान निम्ति आवश्यक speleotherapy को सत्र आयोजित जो। "Kuyalnik" पनि जो मसाज विभिन्न प्रकारका, साथै पानी मेरुदण्ड खण्डका होस्ट एक चिकित्सकीय स्विमिंग पूल, छ। डिजाइन पाठ्यक्रम, को रिसोर्ट अतिरिक्त वजन र सेल्युलाईट देखि छुटकारा प्राप्त गर्न, र बिरामीको एक मनोवैज्ञानिक को सेवाहरू प्रस्ताव छन्।
जवान बालबालिकाको लागि
अस्पताल डाक्टर उत्तिकै सफलतापूर्वक निदान र बाल्यकाल रोगहरु को एक किसिम व्यवहार गर्छन्। तिनीहरूले एक माटोको स्नान, को musculoskeletal सिस्टम को pathologies, साथै peloideterapiya र धेरै अन्य प्रक्रियाहरु मा नियुक्त बाहिर। आफ्ना छोराछोरीलाई आमाबाबु, शाब्दिक पाँच वा छ दिन को राय रूपमा markedly को भोक र मुड बढ्छ, मुड सुधार गर्छ। स्वास्थ्य रिसोर्ट छोराछोरीको खेल मैदान मा सानो ग्राहकहरु लागि, एक खेल कोठा, साथै व्यक्तिगत भोजन कोठामा खान मौका छ।
धेरै रूस यहाँ एक पटक भन्दा बढी आउँछन्। तिनीहरूलाई को बहुमत मा एक अस्पताल मा खर्च छुट्टी को सम्झनाहरु सकारात्मक छन्। उपचार आधार सन्दर्भमा, यो, समीक्षा गरेर न्याय, छ ठूलो। माटोको उपचार को दक्षता, साथै मेरुदण्ड stretching धेरै द्वारा चिनो लगाइएको छ। केही पनि सर्जरी लागि तय गरिएको छ, तर एक अस्पताल मा उपचार भनेर सर्जरी अब आवश्यक छ मदत गरे।
साँच्चै खराब छैन लक्जरी पर्यटक गर्न अद्भुत जस्तो यहाँ आराम। को मुहाना र काला सागर को निकटता, को रिसोर्ट, पर्याप्त खाना र सबैलाई जस्तै सफा कोठा मा पार्क। तपाईं पर्स सामग्रीहरू आधारमा आवास चयन गर्न सक्नुहुन्छ।
चिकित्सा कर्मचारी बारेमा सकारात्मक प्रतिक्रिया को एक धेरै। masseurs बाँकी बारेमा भन्न विशेष गरी राम्रो। धेरै रिसोर्ट लागि Kuyalnik शहर जीवनको frantic गति को पृष्ठभूमि विरुद्ध एकदम फरक दुनिया देखिन्थ्यो। शान्त मापन बाँकी, प्रक्रियाहरु अद्वितीय उपचार, खनिज पानी स्विमिंग पूल को विचारशील चार्ट, एक सना सबैभन्दा मन भयो।
अभाव केही पर्यटकहरु सोभियत युग को धेरै reminiscent छ खराब landscaped क्षेत्र, साथै चिसो मौसम मा ताप को कमी भन्छन्।
तैपनि, पर्यटकहरु को विशाल बहुमत उपचार "Kuyalnik" अस्पताल यति धेरै विरामीहरु मदत गरेको छ विशेष गरी देखि, फेरि र फेरि यहाँ आउन रहेको छ। यसबाहेक, बाँझोपन संग संघर्ष मा एक माटोको स्नान लिइरहेका छन् गर्नेहरूलाई धेरै, गर्भवती गर्न असफल भयो।
योनी को संरचना
हेमोग्लोबिन कसरी वृद्धि गर्न
महिला र पुरुष को घनिष्ठ क्षेत्रमा मालिश: किन र कसरी?
म अन्तिम दिन सावधानीहरु लिन छैन, मासिक गर्भवती प्राप्त गर्न सक्छन्?
किन बच्चा को टाउको पसिना?
कसरी warts deduce गर्न विभिन्न तरिका
तेल र ग्याँस टाइमेन विश्वविद्यालय: ठेगाना, शाखाहरू, संकायहरू, विशेषताहरू
Redpoll चरा: देखिन्छ के harakternizuetsya जस्तै र
पोर्क: व्यञ्जनहरु र खाना पकाउने रहस्य।
फोम को जापानी घर - को XXI सताब्दी को एक घर। जापानी प्रविधिको डोम घर
स्वतन्त्रताको गैरकानूनी deprivation (अपराधी कोड को धारा 127।): विश्लेषण र टिप्पणी
एक स्वादिष्ट र वैविध्यपूर्ण सूप Aspen मशरूम कसरी खाना पकाउनु
के खाद्य पदार्थ मा Phytoestrogens खतरनाक हो?
ताल Elanchik - सबै भन्दा राम्रो ठाउँ मनोरञ्जन र माछा मार्ने लागि
र तपाईं प्रति दिन तपाईं को लागि उपभोग गर्न आवश्यक कति क्यालोरी थाहा?
रूस मा राष्ट्रिय बिदा
कसरी multivarka मा स्ट्रबेरी देखि जाम तयार
ENT - यो ... Otolaryngologist निको पार्नुहुन्छ कि?